Ogaden News Agency (ONA) – Waxaa ka socda Itobiya – Xageed Joogtay Shalay – Noora Afgaab
Waxaa ka socda Itobiya – Xageed Joogtay Shalay – Noora Afgaab
Waxaa laga yaabaa akhristayaasha dhambaaladii yaryaraa een soo diri jiray inay isweydiinayaan maxaa ku dhacay Noora Afgaab, oo tolow miyaa la miineeyay? Wax kale ma jirine xoogaa arimaha dadkii dhili jiray siyaasadaha Itobiya ayaa ka wada yaaban siday wax u socdaan oo doorbiday inay ka gaabsadaan oo aanay ka hordhicin waxa soo guuxaya. Waxaa la filayay doorashada ka dhacday Itobiya inay keento isabadalo dhan walba ah. Laba muuqaal (Scenario) oo laga filayay doorashada inay kasoo baxaan ayaan midna dhaboobin.
1- Waxaa la filayay inay soo gali doonaan baarlamaanka ugu yaraan tobaneeyo mucaarad ah oo ka dhex buuqa baarlamaanka markuu shirayo.
2- Waxaa kaloo la filayay in garabka EPRDF ee kasoo horjeeda nintooxsiga TPLF ay xoog ku yeelan doonaan baarlamaanka lasoo dooranayo.
Labadaa midna ma dhicin. Lamana garanayo ilaa hadda inay tahay sababtu; xikmada shacabka Itobiya oo wada-tashi la’aan isku raacay inay wajiga dhabta ah ee EPRDF caalamka tusaan iyo inay tahay go’aan ay gaadheen EPRDF oo halkii nin ee mucaaradka ahaa ee ku wehliyay baarlamaankii hore u adkaysan waayay, ka dibna qaatay go’aan ah in EPRDF/TPLF la mid noqdo midka dalka Shiinaha oo xisbiga CPC (Communist Party of China) ay dhexdooda isdoortaan. Miday tahayba waxaa lagu dhawaaqay 100% inuu xisbiga EPRDF ku guulaystay doorashadii Itobiya. Qalalaasihii la filayay inay arintaa dhalin doontana madhicin, marka laga reebo banaanbaxyo ay soo abaabuleen murashixiintii Oromada gaar ahaan ee lagaga shubtay codkay heleen. Qawmiyadda Amxaarada iyo xisbiga Simaweye oo kooxda Tgreega ay aad isaga ilaaliyaan (qawmiyadaha kale uma arkaan inay wax ka qaadi karaan), waxaa la siiyay digniin culus ka dib markii si badheedh ah loo dilay kuwii ka hadlay doorashada.
Dad aan si hoose u weydiiyay sababta ay uga cadhoon waayeen doorashada iyo dilka, waxay si wadajir ah iigu jawaabeen; Ree-galbeedka markaan la hadalno waxay noogu jawaabayeen dimoqraadiyadda xoojiya oo doorasahada ka qaybgala.. maxay na dhihi doonaan hadda? Sow ma fiicna inuu caalamka arko beenta ay sheegayaan EPRDF?
Doorashadii way dhamaatay. EPRDF ayaa 100% ku guulyastay. Waxaa bilaabatay marxaladii ugu adkayd iyo awood qaybsigii. Ruugcadaagii TPLF waxay lasoo taagan yihiin oo qofkii damac uu ka galo xukunkaba ay ku odhanayaan; Xageed Joogtay Shalay markaan la dagaalamayay Mingisto? Xataa R/wasaaraha talada dalka loosii dhiibay markuu dhintay Meles Zenawi ayaa lagu yidhi; Xageed joogtay Shalay.
Waxay aad uga shalaytoonayaan ruugcadaaga TPLF inay ogolaadeen inay kusoo galaan Adisababa 1991kii magaca EPRDF. Waxay arkaan in aanay dib dambe dalka ugu xukumi karin magaca EPRDF, sababtoo ah aqlibayadda xisbiga EPRDF waxay isku bahaysteen in Tigreega lala ekeysiiyo qawmiyadaha kale oo sadbudhsi dambe aanay qaadanin. Khasaarihii kasoo gaadhay intay lasoo dagaalamayeen Mingisto inay 100 jibaar ka badan ka qaateen Itobiya, marka waxaa la doonayaa inlasoo afjaro odhaahda ah – Xageed Joogtay Shalay-. Waxaa lawada sugayaa booqashada Obama, kadibna waa lagu kala bixi doonaa.
Kooxaha isku haya Jigjiga oo iyagana sugaya xaaladda Adisababa meesha ay ku dhamaato ayaan iyadana faalo gaaban idinka siin doonaa.